Izinto zokupompa zasekhitshini, ukugcwaliswa kwePot, iiBhokisi zeGumbi lokuhlambela | WOWOW
Ikhaya / Blog / Kutheni i-Faucet yaseKhitshini eyiyo yenza umahluko
2020 / 11 / 09 uhleloBlog 4714 0
Kunzima ukuyibona into oyiphosileyo de uphendukele kwenye yeefompu zasekhitshini eziphambili. Zininzi iindidi, ukusukela ekusebenzeni kwebala ukuya kwiipompo zeshukumisi. Unokufumana itompu kuninzi loyilo olwahlukileyo, kwaye unokufumana ukutsala okanye ukukhupha isitshizi ngokukhetha isitshizi se-facet.
Impompo elungileyo inokwenza inkqubo yakho ibe nzima kakhulu kunye nexesha olichitha ekhitshini lakho ukonwabisa ngakumbi. Ukuba ufuna itephu ekumgangatho ophezulu, kuya kufuneka usoloko ufunda uvavanyo kwangoko kunokuthenga. Abathengi banokuba mbi kwaye bavule kakuhle malunga namava abo neemveliso.
Nokuba uthengela iipompo zasekhitshini zobhedu ezityiwe ngeoyile ezixabisa ikhulu leedola okanye ujonge enye indlela efanelekileyo, uphononongo lunokunceda. Le yeyona ndlela inesandla ekunciphiseni itephu eyiyo yakho. Kuba ayinguye wonke umntu oyingcali kwiitephu zekhitshi, kwinqanaba lokuqala lokubamba inani lezinto ofuna ukuzikhangela. Funda ngakumbi ngolwazi apha malunga noku okanye matte emnyama tsala itepu yasekhitshini.
Amandla ofuna ukuwafumana kwifompu yakho entsha yasekhitshini
Ulwakhiwo lobhedu olupheleleyo
Ngokwesiqhelo ngoku ayisiyongxaki de ukhethe itephu yexabiso elifanelekileyo. Uninzi lweefompo zenziwe ngobhedu ngenxa yokuba zingasaphili njengezinto ezahlukeneyo zesinyithi xa zidibana namanzi. Oku kuyaqhubeka netephu yakho ixesha elide kwaye ufumana eyongezelelweyo kwimali oyichithayo. Amanqaku afana neDelta, iMoen, iKohler, iDanze, kunye nokunye okuninzi kokusebenzisa ubhedu kwiitephu zakhe.
Itekhnoloji yamva nje
Isizukulwane samva siza noninzi lweempompo ezizodwa, kodwa iinkampani ezimbalwa zisalele ngasemva. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba ufumana ixesha elisebenza kakuhle kuwe. Ukuba uthatha isigqibo kwitephu yesenzisi eshukumayo, unokuyifumana ngokulula ekhitshini lakho. Nangona kunjalo, kuba ezi kunokuba nexabiso eliphezulu, kuya kufuneka ukhumbule iteknoloji yokuthinta njengoko ifana kakhulu kwaye inikezela phakathi kwezibonelelo ezilinganayo.
Elinye icandelo ofuna ukuliqinisekisa yiteknoloji yevalvevu entle. Iivalves zizinto ezinokuba sesona sinxibo siphezulu kwimpompo yasekhitshini, kwaye iiarhente ezimbalwa ezinje ngeDelta zibonelela ngetekhnoloji eqinisekisa ukuba iivalve zakho zinobomi obungaphezulu kwezigidi ezi-5 zezicelo. Uninzi lweempompo zisebenzisa iintlobo ezimbalwa zevalvu zeceramic, kwaye kufuneka uqiniseke nje ukuba yenzelwe ubomi obude.
Isiqinisekiso kunye nesiqinisekiso
Ukugqitywa kunye netephu kufuneka kugqunywe ngengqiniseko yobomi obuqinisekileyo, kuyo nayiphi na enye imeko awunakufumana impompo emangalisayo. Into yokuvala oyifunayo kukuthatha indawo yayo kunyaka okanye emibini. Iipompo kufuneka zivale ubuncinci iminyaka emi-5, kuxhomekeke ekubeni ubaphatha gadalala kangakanani, kwaye akufuneki woyike malunga nokutshintsha itephu yakho iminyaka emininzi.
Ungathintela njani ukhetho lwakho
Ukuba ujonga iindlela ezininzi zempompo, unokufumanisa ukuba uthanda ntoni ngokunyanisekileyo kunye nento ongayithandiyo. Ayizukuyenza yonke into elinganayo kwaye akusekho mpompo zakhiwayo ngokufanayo. Olunye uphawu luthathelwa ingqalelo liphezulu kunezinye, kwaye ukuba ufuna okona kulungileyo, uya kuba ulungele ukwenza imali ngenxa yokuba isenokungabizi.
Nangona kunjalo, ukuyekethisa kumbhobho onamaxabiso aphezulu kunika izibonelelo ezinkulu kunye nemveliso ebalaseleyo. Akufanele ukhathazeke malunga nokuhla okucaphukisayo njengoko iipompo zenqanaba lokuqala zenziwa kusetyenziswa itekhnoloji engeyiyo eyodriphu. Elinye icandelo olifumanayo ngelixa uhlawula ngakumbi ifuetet elungileyo sisakhono esongezelelweyo. Oku kunokubandakanya izinto ezininzi ezahlukeneyo kuxhomekeke kwimpompo oyikhethileyo.
Qiniseka ukuba awuyikhethi eyona mpompo imangalisayo, nangona kunjalo ibonakala ibalaseleyo kwaye isebenza ngokufanelekileyo. Kuba awukwazi ukuyivavanya kuqala, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ikhuselekile kakuhle ukuba wenze ukhetho olubi. Ukuba ufunda ezinye iikhalithi ngaphambili, akunakwenzeka ukuba ukhethe okungalunganga kwimpompo yakho entsha yasekhitshini.
Ngaphambili :: Izinto ezi-5 ezenza itephu enkulu yekhitshi next: Ungazitshintsha njani iifompo zasekhitshini?
2020 / 11 / 02 1922
Ngaba uyazi ukuba ungalihombisa njani igumbi lokuhlambela elithandwayo eSunken ngo-2020?